လူတိုငျး သိသငျ့တဲ့ ကားနဲ့ပတျသတျပွီး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျမြား – Daily Feed MM
လူတိုငျး သိသငျ့တဲ့ ကားနဲ့ပတျသတျပွီး ဆောငျရနျ ၊ ရှောငျရနျမြား
Admin_John | February 14, 2022 | Knowledge | No Comments
၁။ ကားစကျ စနှိုးမယျ ဆိုရငျ (၃)ခါထကျပိုပွီးမရမခွငျး တကြိကြိနဲ့ မနှိုးပါနဲ့ ဘကျထရီ ကွောငျ့လား ? ✅starter motor ကွောငျ့လား ဆီကုနျနတောလား?သိတဲ့လူနဲ့ တိုငျပငျပါ။အလှယျနညျးလုပျကွတာတော့ ဟှနျးတီးကွညျ့လို့အသံကယျြတယျဆိုရငျ battery
၂ ။ ကားစကျနှိုးပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြး ဂီယာထိုးပွီးတနျးမထှကျပါနဲ့ 10~15 sec (၁၀ မှ ၁၅ စကျကနျ့)လောကျစောငျ့ပွီးမှ ဂီယာထိုး ထှကျပါ။✅အကွောငျးရငျး ကတော့ အငျဂငျြဝိုငျတှအေငျဂငျြအထကျထိ တကျအောငျစောငျ့ခိုငျးတာပါ။ပွီးရငျလညျး လီဗာ
(accelerator) ကို တနျးပွီးတရှိနျထိုးမနငျးပါနဲ့ ဂီယာကို တဈဆငျ့ခွငျး ပွောငျးသှားအောငျ နငျးလိုကျ လြှော့လိုကျနဲ့ အရှိနျတငျသှားပါ။
၃။ ဆီ ထညျ့တဲ့ နရောမှာလညျး ကိုယျ့ကားနဲ့ကိုကျညီတဲ့ octane number ကိုသုံးရပါမယျ။ဒါပမေယျ့ မွနျမာပွညျမှာတော့ ကားတဈစီးဝယျပွီးရငျထိုးမရပျမခွငျးစီးတော့တာပါပဲ။owner manual / service manual စတဲ့စာအုပျလေးတှေ ကားမှာ ပါရငျပါ မပါရငျ
online ကနရှော ဖတျလို့ရပါတယျ။
✅ဒီမှာက ကိုကျညီတဲ့ octane numberသိတောငျမှ ရှိတဲ့ ဆီဆိုငျကနေ ဟုတျဟုတျ မဟုတျဟုတျ92 နဲ့ 95 ပဲထညျ့ရတာပါပဲ။ octane နဲ့ပတျသတျပွီးကြှနျတျော ရေးပွီးသားပါ။ဆီနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ကံဆိုး/ ကံကောငျးပေါ့။
၄။ အငျဂငျြဝိုငျ လဲဖို့ကတော့ ယဘေူယြ အားဖွငျ့5000 kmတဈခါလဲပါ။ အငျဂငျြဝိုငျ အမြိုးအစားကောငျးရငျ ကောငျး သလို 10000 km ထိရတာလညျးရှိပါတယျ။ အဓိက ကတော့ သတျမှတျ level(lower limit နဲ့ upper limit) ကွားမှာရှိပွီး upper level
အမှတျ အနား ကပျ ရပါမယျ။ workshop တျောတျောမြားမြားက customer အကွိုကျ အငျဂငျြဝိုငျပုံးအကုနျလောငျး ထညျ့ပေးတတျပါတယျ။ အငျဂငျြဝိုငျမြားခွငျးဟာ နညျးခွငျးနဲ့ ဆိုကြိုးအတူတူပါပဲ။အငျဂငျြဝိုငျထဲမှာ bubble တှဖွေဈပွီး ပနျ့ပကျြတတျပါတယျ။
၅။ ဂီယာဝိုငျ (auto ဆီ) လညျးအတူတူပါပဲ။over ဖွဈလို့ ကြှနျတျော အမွဲ ပွနျစုပျထုတျရပါတယျ။ကိုယျ့ဟာကို ဆီလြှော့ခငျြရငျ ပိုကျသေးလေးနဲ့dip stick ထုတျပွီး အဲ့အပေါကျကနေ ပိုကျထိုးပွီး(ဆိုကျဖှနျ) နညျးနဲ့ပဲ ထုတျလို့ရပါတယျ။
✅အရေးကွီးတာ ကတော့ ATF နဲ့ CVTF မမှားဖို့ပါပဲ။Theory အရ ATF ကို CVT မှားထညျ့တာထကျCVT ကို ATF ထညျ့မိတာ ပိုဆိုးပါတယျ။ကိုယျ့ကား ဂီယာဘောကျဈကို လလေ့ာဖို့ လိုပါတယျ။
၆။ ကိုယျ့ plug ကအကောငျးစားဖွဈပွီး အခွအေနကေောငျးသေးရငျ ဆေးပွီးသုံးသငျ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ engine oil တှေ ပုံးအကုနျလောငျးထညျ့ပေးသလိုပါပဲ plug ဆေးတာမှာလညျး plug ကို ဓားနဲ့အသားကုနျခွဈခွငျးဟာ မှားပါတယျ။plug ဆေးတဲ့ဆေးရညျသုံး
ပွီး သှားပှတျတံလေးနဲ့ပဲ ဆေးရမှာပါ။✅ဒီကဆီတှနေဲ့က တော့ plug လဲလိုကျတာအကောငျးဆုံး
၇။ တဈပတျတဈခါတော့ ကားစကျမနှိုးခငျလေးကားရတေိုငျကီ (radiator) လေးကို အဖုံးဖှငျ့ကွညျ့ပါ။(ကားစကျနှိုးပွီး / မောငျးပွီးကာစ လုံးဝ မဖှငျပါနှငျ့)အမွဲ ပွညျ့နရေပါမယျ။ မပွညျ့ရငျ သတျမှတျရလေေးဖွညျ့ကွညျ့ပါ။ မောငျးပွီး အငျဂငျြအေးရငျပွနျဖှငျ့ကွညျ့ပါ။
လြော့နရေငျ leakage ဖွဈနတောပါ။တဈပတျတဈခါ ပွညျ့နရေငျတော့မလိုပါ။ရပွေနျဘူးက စဈတာ အကောငျးဆုံးပါ။ရတေိုငျကီ အဖုံးကို ဖှငျ့စဈပါမြားရငျ ရမေလုံတတျပါတယျ။ ဂရုစိုကျပါ။
၈။ တာယာလပေေါငျကို driver door နောကျမှာကပျထားတဲ့ အတိုငျးဖွညျ့ပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဘီးလစေဈတဲ့ ကိရိယာလေးဝယျထားပါ(၃၀၀၀ကပျြ)တခြို့ဆိုငျတှကေ လပေေါငျတျောတျောမြားပါတယျ။အကွောငျးကလဆေိုငျမှာ သုံးတဲ့ လဖေိအားခြိနျ ကိရိယာကအသုံးမြား
တော့ ဂြီးကပျပွီး ဖိအား မတကျတာပါ။သတိထားပါ။ တာယာတှကေတော့ Theory မှာ၆ နှဈခံပါတယျ။ အသုံးပွုမှုအပျေါ မူတညျပွီး၎ နှဈလောကျထိ သကျတမျးကနြှိုငျပါတယျ။✅တာယာတှရေဲ့ သကျတမျးဟာ ဝယျပွီးသိမျးထားလညျး (၆) နှဈပဲဆိုတာ သတိထားပါ။
၉။ ကားကို ခရီးဝေးသှားတော့မယျဆိုအောကျပိုငျးစဈပွီး alignment ခြိနျပါ။
၁၀။ မီးစုံလငျးဖို့နဲ့ ဟှနျးကောငျးဖို့ ကတော့ ပွောဖို့လိုမညျ မထငျပါ။ ကနျြတာတှရှေိပါသေးတယျ။ဒီ ၁၀ ခကျြကတော့ ကားဝယျစီးပွီး ဘောနပျဖုံးတဈခါမှ လှနျမကွညျ့ဘူးတဲ့ သူမြားအတှကျပါ။တဈဆကျထဲ အချေါအဝျေါ အမှားလေးတှပေါ ရေးပါရစေ။
Swift, Vitz,Fit, Ractis,Demio, Colt, Passo စတဲ့ တံခါး ၅ ပေါကျပါတဲ့ကားတှကေ Hatchback အမြိုးအစားပါ။Axio, Belta,Premio, Allion, Latio စတဲ့ တံခါး ၄ ပေါကျပါတဲ့ကားတှကေ Saloon (Sedan) ကားတှပေါ။
AD van, Mark II Blit တို့လိုကStation wagon (van) တှပေါ။တံခါး ၅ပေါကျမှာမှ suzuki R + လိုနောကျတံခါးက အဖွောငျ့ဆိုရငျ Wagon ပါ။Wish တို့ Ipsum တို့ ကMPV (Multipurpose vehicle) ပါ။
စကှိုငျလာ မဟုတျပါဘူး စပှိုငျလာ (spoiler) ပါ။ဖောကျကလပျမီး မဟုတျပါ ဖောကျလိုကျ (Fog light)ပါ။ Demio 2009 modelကစပွီး rpm ခှကျပါတာပါ။2 rpm မဟုတျပါ။Swift 2006 ထိ 1.3 မြားပွီး နောကျပိုငျးmodel တှကေ 1.2 မြားပါတယျ။
March, Latio, Note ပုံပွောငျးလေးတှကေ1.2 ပါ 1.3 မဟုတျပါ။ကားစ မောငျးထှကျတဲ့အခြိနျ exhaust line ရဲ့အအေးကွောငျ့ စထှကျတဲ့ exhaust gas ထဲကရငှေေ့ ဟာ ငှရေ့ညျဖှဲ့ (condensation) ဖွဈပွီးexhaust ကနေ ကားတိုငျး ရထှေကျပါတယျ။
Thermostat ကို မထုတျကွပါနဲ့။Catalyst convertor ကို မဖွတျထုတျပါနဲ့။Octane 95 ဟာ 92 ထကျပိုထူပါတယျ။ကဲ ဘာရှိသေးလဲဗြာ ???ကားနဲ့ပတျသတျသူမြား ကားကွောငျ့စိတျမညဈရပါစနေဲ့လို့ဆုတောငျးရငျး။
၁။ ကားစက် စနှိုးမယ် ဆိုရင် (၃)ခါထက်ပိုပြီးမရမခြင်း တကျိကျိနဲ့ မနှိုးပါနဲ့ ဘက်ထရီ ကြောင့်လား ? ✅starter motor ကြောင့်လား ဆီကုန်နေတာလား?သိတဲ့လူနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။အလွယ်နည်းလုပ်ကြတာတော့ ဟွန်းတီးကြည့်လို့အသံကျယ်တယ်ဆိုရင် battery
၂ ။ ကားစက်နှိုးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ဂီယာထိုးပြီးတန်းမထွက်ပါနဲ့ 10~15 sec (၁၀ မှ ၁၅ စက်ကန့်)လောက်စောင့်ပြီးမှ ဂီယာထိုး ထွက်ပါ။✅အကြောင်းရင်း ကတော့ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေအင်ဂျင်အထက်ထိ တက်အောင်စောင့်ခိုင်းတာပါ။ပြီးရင်လည်း လီဗာ
(accelerator) ကို တန်းပြီးတရှိန်ထိုးမနင်းပါနဲ့ ဂီယာကို တစ်ဆင့်ခြင်း ပြောင်းသွားအောင် နင်းလိုက် လျှော့လိုက်နဲ့ အရှိန်တင်သွားပါ။
၃။ ဆီ ထည့်တဲ့ နေရာမှာလည်း ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ octane number ကိုသုံးရပါမယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ ကားတစ်စီးဝယ်ပြီးရင်ထိုးမရပ်မခြင်းစီးတော့တာပါပဲ။owner manual / service manual စတဲ့စာအုပ်လေးတွေ ကားမှာ ပါရင်ပါ မပါရင်
online ကနေရှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။
✅ဒီမှာက ကိုက်ညီတဲ့ octane numberသိတောင်မှ ရှိတဲ့ ဆီဆိုင်ကနေ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်92 နဲ့ 95 ပဲထည့်ရတာပါပဲ။ octane နဲ့ပတ်သတ်ပြီးကျွန်တော် ရေးပြီးသားပါ။ဆီနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ကံဆိုး/ ကံကောင်းပေါ့။
၄။ အင်ဂျင်ဝိုင် လဲဖို့ကတော့ ယေဘူယျ အားဖြင့်5000 kmတစ်ခါလဲပါ။ အင်ဂျင်ဝိုင် အမျိုးအစားကောင်းရင် ကောင်း သလို 10000 km ထိရတာလည်းရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သတ်မှတ် level(lower limit နဲ့ upper limit) ကြားမှာရှိပြီး upper level
အမှတ် အနား ကပ် ရပါမယ်။ workshop တော်တော်များများက customer အကြိုက် အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးအကုန်လောင်း ထည့်ပေးတတ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်များခြင်းဟာ နည်းခြင်းနဲ့ ဆိုကျိုးအတူတူပါပဲ။အင်ဂျင်ဝိုင်ထဲမှာ bubble တွေဖြစ်ပြီး ပန့်ပျက်တတ်ပါတယ်။
၅။ ဂီယာဝိုင် (auto ဆီ) လည်းအတူတူပါပဲ။over ဖြစ်လို့ ကျွန်တော် အမြဲ ပြန်စုပ်ထုတ်ရပါတယ်။ကိုယ့်ဟာကို ဆီလျှော့ချင်ရင် ပိုက်သေးလေးနဲ့dip stick ထုတ်ပြီး အဲ့အပေါက်ကနေ ပိုက်ထိုးပြီး(ဆိုက်ဖွန်) နည်းနဲ့ပဲ ထုတ်လို့ရပါတယ်။
✅အရေးကြီးတာ ကတော့ ATF နဲ့ CVTF မမှားဖို့ပါပဲ။Theory အရ ATF ကို CVT မှားထည့်တာထက်CVT ကို ATF ထည့်မိတာ ပိုဆိုးပါတယ်။ကိုယ့်ကား ဂီယာဘောက်စ်ကို လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။
၆။ ကိုယ့် plug ကအကောင်းစားဖြစ်ပြီး အခြေအနေကောင်းသေးရင် ဆေးပြီးသုံးသင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် engine oil တွေ ပုံးအကုန်လောင်းထည့်ပေးသလိုပါပဲ plug ဆေးတာမှာလည်း plug ကို ဓားနဲ့အသားကုန်ခြစ်ခြင်းဟာ မှားပါတယ်။plug ဆေးတဲ့ဆေးရည်သုံး
ပြီး သွားပွတ်တံလေးနဲ့ပဲ ဆေးရမှာပါ။✅ဒီကဆီတွေနဲ့က တော့ plug လဲလိုက်တာအကောင်းဆုံး
၇။ တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ ကားစက်မနှိုးခင်လေးကားရေတိုင်ကီ (radiator) လေးကို အဖုံးဖွင့်ကြည့်ပါ။(ကားစက်နှိုးပြီး / မောင်းပြီးကာစ လုံးဝ မဖွင်ပါနှင့်)အမြဲ ပြည့်နေရပါမယ်။ မပြည့်ရင် သတ်မှတ်ရေလေးဖြည့်ကြည့်ပါ။ မောင်းပြီး အင်ဂျင်အေးရင်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
လျော့နေရင် leakage ဖြစ်နေတာပါ။တစ်ပတ်တစ်ခါ ပြည့်နေရင်တော့မလိုပါ။ရေပြန်ဘူးက စစ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ရေတိုင်ကီ အဖုံးကို ဖွင့်စစ်ပါများရင် ရေမလုံတတ်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်ပါ။
၈။ တာယာလေပေါင်ကို driver door နောက်မှာကပ်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘီးလေစစ်တဲ့ ကိရိယာလေးဝယ်ထားပါ(၃၀၀၀ကျပ်)တချို့ဆိုင်တွေက လေပေါင်တော်တော်များပါတယ်။အကြောင်းကလေဆိုင်မှာ သုံးတဲ့ လေဖိအားချိန် ကိရိယာကအသုံးများ
တော့ ဂျီးကပ်ပြီး ဖိအား မတက်တာပါ။သတိထားပါ။ တာယာတွေကတော့ Theory မှာ၆ နှစ်ခံပါတယ်။ အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်ပြီး၎ နှစ်လောက်ထိ သက်တမ်းကျနှိုင်ပါတယ်။✅တာယာတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ ဝယ်ပြီးသိမ်းထားလည်း (၆) နှစ်ပဲဆိုတာ သတိထားပါ။
၉။ ကားကို ခရီးဝေးသွားတော့မယ်ဆိုအောက်ပိုင်းစစ်ပြီး alignment ချိန်ပါ။
၁၀။ မီးစုံလင်းဖို့နဲ့ ဟွန်းကောင်းဖို့ ကတော့ ပြောဖို့လိုမည် မထင်ပါ။ ကျန်တာတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီ ၁၀ ချက်ကတော့ ကားဝယ်စီးပြီး ဘောနပ်ဖုံးတစ်ခါမှ လှန်မကြည့်ဘူးတဲ့ သူများအတွက်ပါ။တစ်ဆက်ထဲ အခေါ်အဝေါ် အမှားလေးတွေပါ ရေးပါရစေ။
Swift, Vitz,Fit, Ractis,Demio, Colt, Passo စတဲ့ တံခါး ၅ ပေါက်ပါတဲ့ကားတွေက Hatchback အမျိုးအစားပါ။Axio, Belta,Premio, Allion, Latio စတဲ့ တံခါး ၄ ပေါက်ပါတဲ့ကားတွေက Saloon (Sedan) ကားတွေပါ။
AD van, Mark II Blit တို့လိုကStation wagon (van) တွေပါ။တံခါး ၅ပေါက်မှာမှ suzuki R + လိုနောက်တံခါးက အဖြောင့်ဆိုရင် Wagon ပါ။Wish တို့ Ipsum တို့ ကMPV (Multipurpose vehicle) ပါ။
စကွိုင်လာ မဟုတ်ပါဘူး စပွိုင်လာ (spoiler) ပါ။ဖောက်ကလပ်မီး မဟုတ်ပါ ဖောက်လိုက် (Fog light)ပါ။ Demio 2009 modelကစပြီး rpm ခွက်ပါတာပါ။2 rpm မဟုတ်ပါ။Swift 2006 ထိ 1.3 များပြီး နောက်ပိုင်းmodel တွေက 1.2 များပါတယ်။
March, Latio, Note ပုံပြောင်းလေးတွေက1.2 ပါ 1.3 မဟုတ်ပါ။ကားစ မောင်းထွက်တဲ့အချိန် exhaust line ရဲ့အအေးကြောင့် စထွက်တဲ့ exhaust gas ထဲကရေငွေ့ ဟာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ (condensation) ဖြစ်ပြီးexhaust ကနေ ကားတိုင်း ရေထွက်ပါတယ်။
Thermostat ကို မထုတ်ကြပါနဲ့။Catalyst convertor ကို မဖြတ်ထုတ်ပါနဲ့။Octane 95 ဟာ 92 ထက်ပိုထူပါတယ်။ကဲ ဘာရှိသေးလဲဗျာ ???ကားနဲ့ပတ်သတ်သူများ ကားကြောင့်စိတ်မညစ်ရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရင်း။